AMERICAN PIT BULL TERRIER VS. AMERICAN BULLY - ALIKA
Teriteran'ny Pit Bull amerikana (havia) naterak'i John Errington. Mpanakorontana amerikana (ankavanana) naterak'i Ruthless Kennels.
Misavoritaka matetika ny olona American Pit Bull Terrier miaraka amin'ny Lavaka mpamily amerikana . Ny American Bully dia nanjary nalaza be tany Etazonia ary ny ankamaroan'ny olona dia mivondrona ho iray mitovy rehefa misy ny tsy fitoviana mazava na ny olon-tsotra aza dia afaka manondro raha manana info kely momba azy ireo izy ireo.
ny American Bully dia natomboka tamin'ny fiampitana ny American Pit Bull Terrier miaraka amin'ny alika hafa ao amin'ny fianakaviana mpampijaly ary indraindray alika any ivelan'ny fianakaviana mpampijaly. Ny American Bully dia lasa karazany manokana, ary tsy mitovy karazana amin'ny American Pit Bull Terrier (APBT).
Eo ankavia i Spencer, ilay orona manga volo amerikana Pit Bull Terrrier ary eo amin'ny ankavanana dia i Mia ilay zanak'alika Amerikanina Bully Pit.
Ny mampiavaka azy dia ny fisehoana ivelany. Ny American Bullies dia hozatra kokoa ary malalaka be matetika miaraka amina loha lehibe sy tongotra fohy kokoa. Ny Amerikanina Pit Bulls dia tsy hozatra sy tsy malalaka.
Ny Pit Bulls dia alika antonony milanja manodidina ny 30 ka hatramin'ny 70 pounds ary 18 ka hatramin'ny 22 santimetatra eo an-tsoroka, ary ny Amerikanina Bullies dia toa 50 ka hatramin'ny 120 pounds. Amin'ireo karazany roa ireo, ny lanjany sy ny haavony dia tsy manandanja loatra noho ny refy eo anelanelan'ny lanjany sy ny haavony. Ny lanjany sy ny haavony dia samy hafa amin'ny karazany roa, fa ny tanjon'ny American Bully ho hozatra sy malalaka amin'ny lohany lehibe dia mijanona ho fahasamihafana mazava.
Ireto misy ohatra ...
Ohatra amin'ny American Bullies
Ohatra amin'ny Teritery Bull Bull an'ny amerikana
Chevy dia vehivavy pit Bull amerikana aseho eto amin'ny faha-3 taonany
Tokey, Amerikanina Pit Bull Terrier, 7 taona
Zeppelin ilay Amerikanina Pit Bull Terrier amin'ny 2 taona
Tigger the American Pit Bull Terrier amin'ny 20 volana, milanja 60 pounds
Ity no Mampidi-doza ilay mixan'ny orona mena 6 1/2 taona Pit Bull / American Bully. Ny reniny dia Amerikanina Pit Bull Terrier alika lalao ary ny rainy dia Amerikanina Mpanakorontana. Betsaka ny olona no mihevitra fa ny teny hoe alika lalao dia midika hoe alika mpiady, raha ny tena izy dia teny iray ho an'ny alika miasa. Be dia be karazana fihaza ny karazany sy ny tertera miasa dia mampiasa ny teny lalao hilazana ireo alikany miasa. Ny lalao dia manondro ny karazana alika izay hiasa mandra-milatsaka, tsy milavo lefona, maharitra ary vonona ary vonona na inona na inona.
Loza ny orona mena 6 1/2 taona Pit Bull / American Bully mix
labozia mainty mpiandry anglisy
basset hound shar pei mix puppy